XOG: Deni oo war cusub laga sugayo & Senetor Faroole oo ka haraya Aqalka Sare - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon XOG: Deni oo war cusub laga sugayo & Senetor Faroole oo ka...
XOG: Deni oo war cusub laga sugayo & Senetor Faroole oo ka haraya Aqalka Sare
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa laga codsaday soo gudbinta liiska murashaxiinta utartameysa Kuraasta Aqalka Sare Ee Deegaanada Maamulkaasi laga soo dooran doono.
Guddiga hirgelinta doorashada heer dawlad Gobolleed Puntland ayaa ka codsaday madaxweyne Deni inuu deg deg usoo gudbiyo liiska laga sugayo.
Madaxtooyada Garowe warar ay Allbanaadir Media ka heshay ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu saacadaha soo socdo gudbin doono murashaxiinta iyadoo Jurile iyo Faroole dib uga soo muuqan doonaan xubnaha kuraastooda ubaratamaya.
Dr C/raxmaan Sheekh Maxamed (Faroole) & C/risaaq Jurile ayaa labaduba waxay garab istaag cad umuujiyeen Puntland markii Dawlada Federaalka is qabteen waana mid booskooda ay mar kale doonayaan inay kusoo laabtaan.
Deni ayaa u arka senetaradaasi inay hiilkii reer Puntland ka doonayeen ay sameeyeen sidaa awgeedna ay mudan yihiin in dib loo doorto xilli Faroole la leeyahay waxa loo bandhigay in wiilkiisa uu booska ku wareejiyo.
Previous articleHorjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa Afduubka ajaanibta oo gacanta lagu dhigay